Tababare Arsene Wenger Oo Si Wayn Uga Cadhaysiiyay Jamaahiirta Kooxdiisa Isaga Oo Sheegay In Alexis Sanchez Iyo Mesut Ozil Ay Bisha January Bixi Karaan. - WWW.Gool24.net
Tababare Arsene Wenger Oo Si Wayn Uga Cadhaysiiyay Jamaahiirta Kooxdiisa Isaga Oo Sheegay In Alexis Sanchez Iyo Mesut Ozil Ay Bisha January Bixi Karaan.
Tababaraha kooxda Arsene ee Arsene Wenger ayaa cadaawad kala ka abuurtay jamaahiirta kooxdiisa kadib markii uu cadeeyay in labada xidig ee kooxdiisa ugu muhiimsan ee Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ay bisha January kooxdiisa ka bixi karaan. Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in ay jirto suurtogalnimo ay Ozil iyo Sanchez ku bixi karaan suuqa January ee soo socda.
Jamaahiirta Arsenal ayaa ku faraxsanaa warkii uu sheegay wakiilka Mesut Ozil ee ahaa in ay horumar fiican ka sameeyeen wada xaajoodyadii heshiis kordhinta ee xidiga ree Germany laakiin inkasta oo uu Wenger laftiisu rajo yar ka muujiyay in Ozil uu kooxda sii joogi karo, haddana waxa uu xaqiijiyay in Sanchez iyo Ozil ay labaduba bixi karaan bisha January ee soo socota.
Dhawaan ayay ahayd markii la sheegay in Alexis Sanchez uu boodhka kooxdiisa Gunners si cad ugu sheegay in aanu wax heshiis cusub ah u saxiixi doonin waxaana si xoogan ugu dagaalamaya kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain waxayna maamulka Arsenal ku jiraan laba daran mid dooro oo ah in bisha January ay lacag ka helaan iibka Sanchez iyo Ozil iyo in ay doortaan in dhamaadka xili ciyaareedka ay si xor ah kaga bixi karaan.
Wenger ayaa sheegay in ay xaalada dhinacyo badan ka baadheen balse waxa uu xusay in ay suurtogal tahay bixitaanka Ozil iyo Sanchez wuxuuna yidhi: “Xaaladayada waxaanu baadhitaan ugu samaynay xal kasta. Waa suurtogal(in ay bixi karaan)”.
Laakiin markii Wenger la sii waydiiyay hadalkii wakiilka Ozil ee rajada u abuuray jamaahiirta Arsenal ee sheegayay in uu sii joogi doono ayuu ku jawaabay: “Waa fahankayga in uu doonayo in uu sii joogo. Waxaan rajaynayaa in xaalada dhinaca kale loo dhigi karo, waqti xaadirkan anagu kuma dhawin waxaanu ku dhawaaqno”.
Manchester City iyo PSG ayaa suuqa bisha January ee soo dhaw waxay ku dagaalami doonaan saxiixa Alexis Sanchez kaas oo ay hadda isaga hubaal u muuqato in waqtigiisa Emirates Stadium uu tirsan yahay laakiin xaalada Ozil ayaan wali u xumaan sida Sanchez waxaana wali sii jirta suurtogalnimada uu kooxda ku sii joogi karo in kasta oo ayna ahayn wax la hubo.